DemandJump: Kufanotaura Kushambadzira uye Kukwikwidzana Nenjere | Martech Zone
Iyo Internet chinhu chinoshamisa sosi yedhata iyo, kana ikacherwa, inogona kuburitsa hupfumi hwezivo. Asi maererano yegore rino CMO Ongororo, chete chetatu chevatengesi vanokwanisa ratidza kuitika yemari yavo yekutengesa, hafu chete ndiyo inokwanisa kuwana yakanaka hunhu hwehunhu hwekukanganisa, uye vangangoita 20% vanokwanisa kuyera chero kukanganisa chero chii zvacho. Hazvishamise kuti kushambadzira analytics mari inotarisirwa kuwedzera 66% mumakore matatu anotevera.
Sezvo zvikamu zvevatengi nevatengi nzendo dzekutenga dzebhizinesi dzichifamba pamhepo, vashambadzi vanoziva kuti vanofanirwa kuwana meseji pamberi pevateereri vakakodzera kwavari. Zvemukati kushambadzira, zvemagariro midhiya kushambadzira, uye zvinokurudzira kushambadzira zvinoshandiswa zvinopfuurira kuwedzera sezvo dzimwe nzira dzekutengesa dzinosvika pakuzadza.
DemandJump ndiko kufambira mberi kukuru mukufungidzira kwekushambadzira kwehungwaru, zvichigonesa vashambadzi kuburitsa mikana yekushambadzira, kuteedzera makwikwi kufamba uye kumhanyisa traffic yako uye shanduko. Kutarisa nekukurumidza padheshibhodhi ravo kunokupa iwe muongororwo wekutarisa kwenyaya yako nemikana, kusanganisira kutungamira chizvarwa, nhau uye mikana yePR, mikana yeCommerce, mikana yemubatanidzwa, bhurogu uye mikana yemukati, nezvimwe.
Zvemukati Kushambadzira Njere
Uchishandisa DemandJump zvemukati zvishandiso zvehungwaru, unogona kutarisa chidimbu chega chega chemukati chiri kugadzirwa nevakwikwidzi, mashandiro azvinoita, uye kunyatso kuzivisa sosi dzekutumira traffic kune avo emukati.
Izvi zvinogona kukubatsira kunongedza vanokurudzira uye masosi anoreva ayo anotyairawo traffic kune yako traffic. Iyo chikuva kunyange inopa hukama manejimendi maturu ekuti iwe urambe uchikwanisa uye uteedzere kwakakosha hukama neako anokurudzira.
Iyo muto wakavanzika kumashure DemandJump ndiko kuunganidzwa kweakakosha makwikwi ekuziva iwe aunogona kuunganidza kubva papuratifomu kuti utungamise zvemukati zvako uye nzira dzekusimudzira. Fungidzira kuti iwe une yakaoma kushambadzira shandisa kune akawanda ad ad network, kuratidza ad netiweki, kutsigira uye dzimwe nzira. DemandJump inogona kukubatsira iwe kuona kuti ndeapi masosi ari kutyaira traffic uye kuita, kwete chete maad network avo aari kumhanya. Ivo vanotozvipa yavo vega yekutengesa zvibodzwa algorithm kuisa pamberi mikana iyo ichazopa kwakanyanya kuita.
Kunzwisisa kushambadzira kunokwikwidza vakwikwidzi vako vari kuita marongero avo pane zvinogona kukubatsira iwe kunzwisisa mapuratifomu aunoda kukwikwidza nawo futi.
ne DemandJump, Vashambadzi vepamhepo pamhando ipi neipi yebhizimusi - kubva e-commerce, zvinyorwa, bhizinesi-kune-bhizinesi, kune vasiri purofiti vanogona kuwana ruzivo rwakakosha mune yavo yakawanda-chiteshi nzira yekutengesa. Ona kwaunoungana uchikwikwidza nevanokwikwidza uye zviito zvaunofanira kutora kuti ukure.
Chiitiko Chinodiwa! Svetuka Mukuita!
Kuzivisa: Ini ndakashanda padhuze nemuvambi Shawn Schwegman pamusoro pemakore, isu taita mhinduro yezvedu kuedza, uye tiri kugadzira kuenderera mberi kudyidzana ne DemandJump.
Tags: ad network network njereaffiliate marketingkukwikwidzana njereContent Marketingkuda kusvetukadhamujumpdigital kushambadzira njeree-zvokutengeseranaecommercetsvaga vanokurudziramaitiro ekuwana vanokurudzirakuchinjainfluencer chikuvamutungamiri wechizvarwakushambadzira njerekutumira nhaupredictive analyticskufungidzira ungwarukufungidzira kushambadzirahukama hweveruzhinjikutumira motokari